Sawirro:- Maxkamadda Ciidamada ayaa xukuntay Ciidamo lacag ka dhacay Shirkadda… – XOGMAAL.COM
Sawirro:- Maxkamadda Ciidamada ayaa xukuntay Ciidamo lacag ka dhacay Shirkadda…
waxana Xukunka eedeysanayaashan ku dhacay ka mid ah in gabi ahaanba laga saaray ka mid ahaanshihoodii Ciidamada Xoogga dalka.
By Soomaaliya	 On Aug 9, 2018
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku dhawaaqday xukunka eedeysanayasha kala ah Dable Xoogga C/kariim Muuse Muxudiin 22-jira, Dable Xoogga Aweys Faarax Maxamuud 21 –jir ah iyo Maxamuud Cali Maxamed oo maqane ah.
Raggaan eedeysan ayaa loo heystaa dhac burcadnimo hubeysan ah oo ay tiro labo jeer u geysteen Laamaha Shirkadda Hormuud ay ku kala leedahay deegaanka Kaawo-godeey ee degmada Wadajir iyo deegaanka Km 13 oo ah ee duleedka Muqdisho.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ayaa eedeysanayaasha waxay ku xukuntay mid shan sano oo xabsi ciidan ah iyo iney bixiyaan dhammaan lacagihii ay ka dhaceen Shirkadda Hormuud.
Dhinaca kale Maxkamadda ay la wareegtay Hubkii ay dhaca ku geysteen,waxaana Xukunka ku dhawaaqay Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute Guddoomiyaha Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka sida.
Eedeysanayaasha ayaa Maxkamadda horteeda ka qirtay danbiga ay galeen,waxana Xukunka eedeysanayaashan ku dhacay ka mid ah in gabi ahaanba laga saaray ka mid ahaanshihoodii Ciidamada Xoogga dalka.
Akhriso Hooyo uur leh iyo ilmaheeda yar oo arxan darro loogu dilay Magaalada….
Trump sodogii iyo sodohdii oo dhalashada Maraykanka qaatay